Ahoana ny fananganana marika tena izy | Martech Zone
Ahoana ny fananganana marika tena izy
Alatsinainy, 13 Jona, 2022 Talata, Jona 14, 2022 Jonathan Low
Maneho izany amin'ny fomba samihafa ireo mpampianatra ara-barotra malaza eran'izao tontolo izao, saingy manaiky ny rehetra fa ny tsena ankehitriny dia efa masaka amin'ny teoria, tranga ary tantaram-pahombiazana mifototra amin'ny marika olombelona. Ny teny fototra ao anatin'ity tsena mitombo ity dia ny ara-barotra tena izy ary marika olombelonas.
Taranaka samihafa: Feo iray
Philip Kotler, iray amin'ireo Grand Old Men of Marketing, dia manonona ilay tranga 3.0 Marketing. Ao amin’ny bokiny mitondra io anarana io ihany, izy dia miresaka momba ireo mpitantana ara-barotra sy mpampita hafatra izay “mahay mahatsapa ny fanahiana sy ny fanirian’ny olombelona”.
Ny feon'ny taranaka tanora dia mpampianatra fifandraisana Seth Godin, izay milaza fa “Tsy te ho voafafa amin'ny vaovao momba ny vokatra na serivisy intsony izahay. Te hahatsapa fifandraisana amin'izany izahay. Ny maha-olombelona no hany fomba hahazoana fandresena. ” Ao amin'ny modely faribolana volamena malaza sy TED Talks, Simon Sinek manondro fa ny Nahoana izay iorenan'ny orinasa iray dia tsy maintsy mafy orina, hany ka afaka mivarotra karazana vokatra avy amin'ity sehatra ity ny orinasa.
Na dia eo aza ny taranaka samy hafa sy ny teboka fanombohana, ireo matihanina ara-barotra manan-talenta ireo dia miresaka zavatra mitovy: Marika olombelona.
Tsy misy zava-baovao atahorana. Tsy vaovao ho an'ny orinasa ny mikaroka ny maha-azo itokiana – ary tsy vaovao amin'ny orinasa ny mifantoka amin'ny fihainoana ny mpandray azy sy ny fanekena ny fahadisoany fa tsy ny mandany ny fotoanany rehetra amin'ny fandresen-dahatra sy ny fanangolena ny mpanjifany.
Ny fiovan'ny paradigma dia azo jerena amin'ny fikarohana toy ny Ny Lippincott-LinkedIn Brand Power Score, izay manaporofo fa ny fomba fiasa manokana, marefo ary maha-olombelona amin'ny fifandraisana sy ny marika dia raisin'ny mpanjifa tsara. Ny fikarohana dia naneho fa ny mpanjifa dia nihoatra ny vinavinan'ny manam-pahaizana, ka mahatonga ny fivarotana olombelona ho lalana tsy azo lavina.
Ny fanontaniana dia izao: Afaka manohy ny marikao ve ianao?
Ny marika olombelona
Ny fivarotana tena izy dia tsy nipoitra avy tao anaty rivotra fotsiny. Hetsika sy fironana isan-karazany no nanentana azy nandritra ny taona maro, toy ny hyper transparency, co-creation, open-source, crowdsourcing, ny marika fianarana, anti-branding, sns.
Saingy zavatra roa no nahatonga ny fiovan'ny paradigma amin'ny varotra:
1. Ny varotra tena izy dia fanehoana hetsika - fa tsy marika
Mifantoka amin'ny orinasa ny trangan-javatra, amin'ny alàlan'ny asa am-pahibemaso sy tsy tapaka amin'ny maha-izy azy sy ny fandraisany andraikitra, ka lasa hetsika mahasoa fa tsy marika fisaka.
Raiso Toddy Breziliana Pepsi ohatra ny fanentanana:
Any Brezila, ny varotra ho an'ny toddy Nanomboka nihantona ny fisotroana sôkôla ary nanomboka nitaky zava-baovao ny tsena. Ny Pepsi dia efa nanana mascot, nalaza tamin'ny ambaratonga ambony, indrindra ny mpanjifa tanora. Noheverin'izy ireo ho mahafatifaty sy mampiala voly izy, ka izany no fomba fahitantsika ny mascots marika.
Pepsi dia nivoaka tamin'ny rantsambatana ary nanao ny mascot azy ireo ho mpitondra tenin'ny hetsika ivelany. Pepsi dia nahita hetsika mahery vaika tao amin'ny media sosialy. Fikambanana sy olon-tsotra maromaro no nandroso ity hetsika ity, nifantoka tamin'ny fihanaky ny fanambarana tsy misy hetsika. Nifantoka tamin'ny firenena iray ahitana kolikoly sy fampanantenana poakaty ny hetsika.
Pepsi dia nanoro hevitra fa ny taranaka tanora dia mampiasa hetsika fifanakalozan-kevitra an-tserasera mba hanaovana fanambarana avy amin'ny mascot. Moo isaky ny fampanantenana poakaty no re – ary nahomby ny fampielezan-kevitra.
Tsy ho ela, Moo satria mitovy amin'ny tapaho ny fotaka. Nanatanteraka ny Moo-hafatra amin'ny resak'izy ireo, na an-tserasera na ivelan'ny aterineto. Tampoka teo dia anisan'ny fironana iray i Toddy. Nitombo ny fivarotana ny vokatra ary nanova ny marika ho hetsika i Pepsi.
2. Fifindran'ny mpanjifa mankany amin'ny fifantohana amin'ny olombelona
Raha tokony hifantoka amin'ny fomba fandresen-dahatra ny mpandray, toy ny fampielezan-kevitra, paikady, spins, sns., dia hanomboka hifantoka tsikelikely amin'ny fitadiavana ny antony hividianan'ny olona ny varotra. Amin'ny ho avy dia ho fanombohana ny fampandrosoana ny vokatra izany.
Anisan'ny antony mahatonga ny varotra tena izy ny momba ny olona (fa tsy ny mpanjifa) sy ny filantsika fototra indrindra. Anisan'izany ny:
Mahatsiaro ho azo
Ohatra iray amin'ity lafiny faharoa amin'ny fiovan'ny paradigma ity dia hita ao amin'ny rojo Amerikana Dominos.
Tamin'ny fiandohan'ny noughties, Dominos dia niharan'ny herisetra noho ny kalitaon'ny sakafo, ny fahafaham-pon'ny mpiasa ary ny fifalian'ny mpiasa. Raha tokony ho lasa fiarovan-tena sy hanao fampielezan-kevitra handresena lahatra ny mpanjifa ny mifanohitra amin'izany i Dominos, dia nisafidy ny hampihatra paikadin'ny krizy manetry tena sy mandray andraikitra. Ny Dominos dia nampiditra kaody QR maromaro amin'ny boaty pizza, mangataka ny mpanjifa hijery ny kaody ary hitondra izany ao amin'ny Twitter hanehoana ny heviny.
Paikady nahomby izany, satria ny olona rehetra dia mahatsapa fa ilaina ny henoina sy hahatsapa ho azo.
Ny paikady dia niteraka fanangonana angon-drakitra marobe izay nampiasain'ny orinasa tamin'ny fomba samihafa:
Ao anatin'ny varotra ivelany ataon'izy ireo, Dominos dia nividy ny sasany amin'ireo toerana fanaovana dokambarotra lafo vidy indrindra any Etazonia, anisan'izany ny takela-by Times Square, mba hampisehoana ireo bitsika mpanjifa ireo amin'ny fotoana tena izy. Na dia fanehoan-kevitra ratsy aza dia naseho, mba hampiroboroboana ny marika famantarana ny fahamarinana sy ny mangarahara. Noho izany dia nasehon'i Dominos fa ninia nihaino mafy kokoa izy ireo.
Sary: Fast Company
Ao anatin'ny sehatry ny varotra anatiny sy ny fikarakarana ny mpiasa, Dominos dia nametraka efijery solosaina amin'ny faritra famokarana pizza mba hanomezana valin-kafatra amin'ny fotoana tena izy. Izany dia nanamaivana ny elanelana misy eo amin'ny mpiasa sy ny mpanjifa.
Ny fanentanana dia niteraka fitomboan'ny mpanaraka Twitter 80,000 tao anatin'ny iray volana. Ny vokatra hafa dia nahitana ny fiakaran'ny fifantohan'ny PR, ny fitomboan'ny fahafaham-pon'ny mpiasa, ny fanatsarana ny lazan'ny marika ary ny fitomboan'ny olombelona. Ity no marketing tena izy amin'ny tsara indrindra!
Marketing izay mampanantena Ampy fotsiny
Misy ohatra mahafinaritra maro momba ny orinasa manokatra ny masony amin'ny tombony amin'ny varotra tena izy. Ny vokatra dia tantaram-pahombiazana entin'ny fanentanana tsy manam-paharoa izay mipetraka tsara amin'ny mpanjifa.
Ao amin'ny orinasa MarTech ahy JumpStory manam-pahaizana manokana amin'ny fikarakarana sary sy horonan-tsary tena izy, ka tsy mila mampiasa ireo sary manjavozavo rehetra misy ianao. Mampiasa AI izahay hanesorana ireo votoaty tsy mitombina rehetra, ary mifantoka amin'ny teny fototra roa izay fototry ny varotra tena izy: ny maha-olombelona & ny maha-olona.
Ireo tranga ireo dia natao hanentanana anao hanao ny tetezamita ho marika mandray andraikitra sy maha-olombelona kokoa - ary miaraka amin'ity tetezamita ity, mijinja ny tombotsoa ara-toekarena eny an-dalana.
Ny rojo antsinjarany amerikana iray dia niharan'ny afo noho ny tsy fahampian'ny vokatra malaza indrindra. Ho setrin'izany tsikera izany dia namoaka teny filamatra vaovao ny orinasa – ary miaraka amin'izany, toe-tsaina vaovao: Raha misy tahiry dia manana izany izahay. Ity fanesoana tena mafy ity dia nisy fiantraikany tsara teo amin'ny varotra sy ny lazan'ny marika.
Any amin’ny tanin’Andriamanitra, dia afaka mahita trano fisakafoanana sinoa iray manao dokam-barotra amin’ny teny filamatra ianao Sakafo tany am-boalohany. Mahantra anglisy. Ankoatra ity hatsikana sy fanesoana tena ity, ny tsipika punch dia milaza olana mahazatra ao anatin'ny indostrian'ny trano fisakafoanana. Ho an'ny mpanjifa mikatsaka ny maha-azo itokiana azy, ny iray amin'ireo zavatra ratsy indrindra mety hitranga dia ny mankany amin'ny trano fisakafoanana italiana raha tsy misy mpizara danoà feno. Ny zavatra tadiavinay dia hatsaran-tarehy manjavozavo hanompoana ny pizza amin'ny fitiavana.
Amin'ny lafiny iray, tianay ny hahatakatra ny teny rehetra ao amin'ny sakafo ary hifandray tsara amin'ny mpiasa. Sarotra indraindray izany raha ny maha-azo itokiana no laharam-pahamehana. Ny rojo Shinoa dia manambara izany olana izany ary mandray ny heviny momba izany.
Ireo tranga roa ireo dia ohatra amin'ny tranga izay Fijerena fironana dubs tsininy. Endrika ploraly an'ny teny portmanteau ny teny awesome ary tsininy. Amin'ny fomba mitovy amin'ny fampielezan-kevitry ny Dove's Real Beauty, ireo tranga amerikana roa ireo dia mampiseho fa afaka mandinika ny maha-olombelona anao ianao ary mametra ny fampanantenanao amin'ireo izay tena azo tanterahina. Raha ny marina, ireo rojo ireo dia saika mampanantena kely noho ny atolony.
Raha ny teoria, ny marika rehetra dia manana toetra miavaka, mitovy amin'ny an'ny olombelona. Ny zava-misy dia mitoetra fa ny toetra sasany dia manintona kokoa noho ny hafa. Ny sasany dia misongadina amin'ny fomba tsara sy mahery vaika. Amin'ny toe-javatra sasany, afaka manondro ny antony marina isika ary amin'ny hafa, toa tsy takatry ny saintsika izany.
Ao anatin'ny tontolon'ny varotra dia misy ohatra vitsivitsy misongadina amin'ity tranga ity. Miracle Whip dia miavaka amin'ny azy Tsy natao ho an'ny rehetra izahay tantara; Malaza amin'ny vazivazy sy ny fahatsoram-pony ny Inocent Drinks. Ohatra iray amin'io toetra io ny lahatsoratra izay hita eo amin'ny faran'ny ankamaroan'ny baoritra ranom-boankazo, izay mivaky hoe: Atsaharo ny mijery ny fanambaniko.
Ao Etazonia, fantatry ny ankamaroan'ny olona ny raharaha Southwest Airlines. Nanao politika ny orinasa izay milaza fa tsy tokony hitovy ny fanambarana momba ny fiarovana. Mankanesa ao amin'ny YouTube ary jereo ny ohatry ny tanora mpikarakara sidina mitendry ny lalany amin'ny fomba fiarovana ao anaty fiaramanidina. Mariho ny fomba iharan'ity fomba fiasa ity amin'ny tehaka mitsangana.
Raha mbola tsy nijery ny fanambanin'ny siny hoditray ianao tato ho ato dia mety izao no fotoana tsara hijerena azy. pic.twitter.com/tsw2Fs8WD1
- zava-pisotro tsy manan-tsiny (@tsy manan-tsiny) Novambra 20, 2013
Fampandrosoana sy fandrefesana ny maha-olombelona
Ny maha-olombelona dia iray amin'ireo toetra vitsivitsy manana hery manetsika mpanjifa, vokatra ary fiaraha-miory. Tena mahafa-po tokoa izany ao anatin'ny paramètre mety rehetra.
Mba hahazoana tombony amin'ny maha-olombelona dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny fomba voalamina sy miompana amin'ny tanjona. Izany dia manampy hamantatra ireo faritra ilana fanovana ary manome antsika ny fanosehana farany hanombohana ny dingana.
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanosika ity asa ity dia amin'ny alalan'ireto fanontaniana efatra ireto:
Ahoana no ahafahantsika mihaino mafy kokoa?
Nahoana no misy ny marikantsika?
Inona no maha-olombelona antsika?
Manana toetra ve ny marikantsika?
Miorina amin'ny fisaintsainana sy fifanakalozan-kevitra mifototra amin'ireo fanontaniana ireo, azonao atao ny mitsoraka ao anatin'ireo mari-pamantarana samihafa sy fizotran'ny fanehoan-kevitra izay mandrafitra ny paikadin'olombelona, ​​​​sehatra ary ny fifandraisana. Mirary soa ary tsarovy ny hifalifaly eny an-dalana.
Tags: ara-barotra tena izymarikamarikasakafo sinoaambin 'ny daomytsininyolon-dehibe lehibe amin'ny varotraahoana noolombelonamarika olombelonafifantohana olombelonamaha-olombelonazava-pisotro tsy manan-tsinyjumpstoryLinkedin marika power scorelippincottlippincott-linkedin marika herin'ny marika3.0 marketinghanafinakaravasy fahagaganaMoosakafo tany am-boalohany mahantra anglisyPepsipepsi cotoetraphilip kotlerQR Codeseth godinSimon sinekhaino aman-jery sosialyresaka Tedtimes squaretoddytrendsetting
Jonathan Low Monday, June 13, 2022 Tuesday, June 14, 2022
Jonathan Low dia iray amin'ireo mpandraharaha sy mpanoratra orinasa malaza indrindra any Danemark. Løw no mpiara-manorina ny JumpStory, sehatra an-tsary mifototra amin'ny AI izay antsoina hoe "Netflix of images." JumpStory amin'izao fotoana izao dia manana mpanjifa any amin'ny firenena 150 mahery ary mitombo haingana.
Fomba 7 ahafahan'ny DAM mety hanatsara ny fahombiazan'ny marikao
Ny Marketing dia mila angon-drakitra kalitao mba ho entin'ny angona - Tolona & Vahaolana